विगत नौ वर्षदेखि केही पनि नखाएको यी जोडीले गरे दाबी, कसरी बाँचिरहेका छन त ? जानौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»विगत नौ वर्षदेखि केही पनि नखाएको यी जोडीले गरे दाबी, कसरी बाँचिरहेका छन त ? जानौ
विगत नौ वर्षदेखि केही पनि नखाएको यी जोडीले गरे दाबी, कसरी बाँचिरहेका छन त ? जानौ
By मनिषा थापा on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:०४ रोचक खबर
एजेन्सी : पापी पेटका लागि मानिसहरू यति धेरै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। पेट भर्नका लागि मानिसले कुनै न कुनै काम गर्नैपर्ने हुन्छ। खाना नखाँदा त बिरामी नै परिन्छ। तर एक अमेरिकी जोडीले विगत कैयौं वर्षदेखि केही नखाइकनै बाँचिरहेको दाबी गरेका छन्। नौ वर्षदेखि कहिलेकाहीँ स्वाद लिन यसो केही खाएपनि नियमित रूपमा आफूहरू निराहार नै बस्ने उनीहरूको दाबी छ।
खाना खाने कुनै आवश्यकता नै नरहेको उनीहरू बताउँछन्। कसरी पोषण पु–याउँछन् छ त उनीहरू ? ब्रह्माण्डको ऊर्जाबाट पोषण पुग्ने उनीहरूको दाबी छ ।क्यामिला क्यास्टेलो र उनका पति अबकाही रिकार्डो अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्छन्। उनीहरू मूलतः इक्वेडरका हुन् र त्यहाँ आउजाउ गरिरहन्छन्। सन् २००८ पछि आफूहरूले केही नखाएको र विगत तीन वर्षयता त अनाजको दाना मुखमा नपरेको उनीहरू बताउँछन्।
क्यामिला त झन् गर्भवती अवस्थामा पनि आफूले केही नखाएको बताउँछिन्। तैपनि आफूले अत्यन्तै स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिएको उनको भनाइ छ। उनीहरू यसलाई ब्रेथेरियन प्रोसेस भन्छन्। यसमा सात दिनसम्म केही खाइँदैन। सात दिन पानी र पातलो जुस लिइन्छ अनि बाँकी सात दिन अझै कम पानी र पातलो जुस लिइन्छ।
पछि हावा मात्र खाएर बाँच्ने हो। अस्ट्रेलियामा जन्मेकी ज्यास्मुहिन नामक महिलाले यो पद्धति शुरुवात गरेकी हुन्। तर यसलाई पोषणविद्हरूले बकवास संज्ञा दिएपछि यो जोडीले स्पष्टीकरण दिँदै आफूहरू यदाकदा ठोस पदार्थ खाने गरेको तर अरू मान्छेले जस्तो नियमित र धेरै नखाने बताए।